Hiob 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
4 Ɛnna Elifas+ a ofi Teman no buae sɛ: 2 “Sɛ obi bɔ mmɔden ka asɛm bi kyerɛ wo a, ɛbɛhaw wo anaa?Nanso hena na obetumi aka ne kasa ahyɛ? 3 Hwɛ! Woateɛ nnipa pii so,+Na nsa a emu agow no, woahyɛ no den.+ 4 Nea ɔrehwe ase no, wo nsɛm ama wasɔre agyina;+Na nkotodwe a ahodwow no, woahyɛ no den.+ 5 Afei a ebi ato wo no, woabotow;Ebi kaa wo yi de, woahaw. 6 Ɛnyɛ wo nyamesuro na ama woanya ahotoso?Ɛnyɛ w’anidaso ne w’akwan a ɛteɛ?+ 7 Mesrɛ wo, kae eyi: Hena na ne ho nni asɛm a wɔasɛe no pɛn?Na ɛhe na wɔapopa obi a ɔteɛ+ pɛn? 8 Nea mahu ne sɛ wɔn a wosusuw bɔneNe wɔn a wodua ɔhaw no, ɛno ara na wotwa.+ 9 Onyankopɔn home mu na wɔsɛe,Na n’abufuhyew mu na wɔn awiei ba. 10 Gyata bobom, wɔte gyataforo nne,Nanso gyatanini sẽ bubu. 11 Hanam a enni hɔ nti, gyata wu,Na gyata mma bɔ pete. 12 Asɛm bi wiawiaa ne ho baa me nkyɛn,Na etwaa m’asom+ ketewaa bi wɔ 13 Ɔdadwen a efi anadwo anisoadehu mu no mu,Bere a nnahɔɔ tɔ nnipa so no. 14 Ehu kaa me, me ho popoe,Na ehu hyɛɛ me nnompe nyinaa mã. 15 Honhom bi betwaam wɔ m’anim;Me ho nhwi sɔresɔree. 16 Ebegyinaa hɔ dinnNanso manhu sɛnea ɛte;Biribi begyinaa m’ani so;Ɛhɔ tɛm dinn, na afei metee ɛnne bi sɛ: 17 ‘Onipa desani​—obetumi ateɛ asen Onyankopɔn anaa?Na ɔbarima ho betumi atew asen ne Bɔfo?’ 18 Hwɛ! Onni gyidi wɔ n’asomfo mu,Na n’abɔfo nso, obu wɔn sɛ wɔtɔ sin; 19 Na wɔn a wɔtete dɔtedan mu de, obebu wɔn dɛn,Wɔn a wɔn fapem yɛ dɔte no!+Wɔyam wɔn ntɛm sen abubummabaa. 20 Ebefi anɔpa akosi anwummere no, na wɔayam koraa;Wɔyera korakora a obiara nnwen ho. 21 Wɔn ntamadan hama no, wɔntetewee anaa?Nyansa a wonni nti, wowuwu.